Octoprint: mitantana ny mpanonta 3D anao lavitra | fitaovana maimaim-poana
Isaac | | Fanontana 3D, Raspberry Pi
Raha tianao ny Fanontana 3D, azo antoka fa te hahalala bebe kokoa momba izany ianao ny tetikasa octoprint. Lozisialy loharano misokatra azo ampiharina ho an'ny fanaraha-maso lavitra an'ireo fitaovana fanamboarana fanampiny ireo. Miaraka amin'ity karazana programa ity dia hahatratra fitantanana tsotra sy intuitive ianao, hahazoana vokatra tsara kokoa amin'ny tetikasanao. Fameno iray hafa ho an'ny programanao Volavola CAD y programa hafa ilaina ho an'ity karazana fanontam-pirinty telo dimanjato ity.
1 Inona no atao hoe Octoprint?
1.1 Ny endri-javatra amin'ity rindrambaiko ity
2 Plugins ho an'ny Octoprint
2.1 Ahoana ny fametrahana plugin
Inona no atao hoe Octoprint?
OctoPrint dia fampiharana maimaim-poana sy open source mba hahafahana mifehy ny mpanonta 3D. Gina Häußge ny mpamorona azy, izay nampiasa ny kaody mifehy azy manokana ho an'ny mpanonta 3D-ny. Saingy toa tena nahaliana ilay tetikasa ary nahasarika ilay mpanamboatra Espaniola BQ, namatsy vola ny fampandrosoana ka ny OctoPrint no misy ankehitriny: iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra ho an'ity fitaovana ity ary ampiasaina manerana izao tontolo izao.
Afaka manao izany ianao mitantana ny fanontana rehetra amin'ny fomba lavitra sy voafehytsy mila manatrika. Ho fanampin'izany, intuitive sy tsotra izy io, miaraka amina interface tsara amin'ny Internet izay tsy maintsy ampifandraisinao fotsiny ny fitaovana avy amin'ny toerana tianao hifehezana azy amin'ny tambajotra eo an-toerana.
Ary tsy afaka mandefa fanaraha-maso fotsiny amin'ny mpanonta printy 3D tokana ianao, raha manana maromaro amin'ny Internet azonao atao ny mitantana azy rehetra. Ohatra, mandefa rakitra Gcode maromaro any afovoany. Ary ny zavatra tsara dia azo apetraka amin'ny milina misy loharanon-karena ambany, na dia amin'ny Raspberry Pi SBC aza. Izany no safidy tian'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Mila mampiasa fotsiny ianao misy ny fonosana OctoPi.
Raha tsy ampy ho anao izany, OctoPrint dia afaka manolotra endri-javatra maro kokoa, toy ny manara-maso ny asan'ny mpanonta iray mampiasa fakantsary amin'ny fotoana tena izy mba hahafantarana ny fandehan'ny fanontam-pirinty ary hanamarina avy hatrany fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Fampahalalana misimisy kokoa sy fampidinana avy amin'ny Octoprint - Pejy ofisialin'ny tetikasa
Ny endri-javatra amin'ity rindrambaiko ity
Ankehitriny fantatrao ny momba ny OctoPrint, tokony ho fantatrao hoe inona izany ireo fiasa lehibe ary ny tombony tokony hampiasanao ity rindrambaiko ity hifehezana ny mpanonta 3D anao:
Fanaraha-maso tanteraka ny mpanonta 3D avy lavitra.
Fahaizana manara-maso ny asa sy ny fanaraha-maso.
Afaka manome angona avy amin'ny sensor maripana izy io.
Azonao atao ny manitsy ny masontsivana raha hitanao fa ilaina izany.
Atombohy ny fanontana amin'ny alàlan'ny WiFi, ary atsaharo na atsaharo izany raha misy tsy mety.
Manapaka ny fiasan'ny rindrambaiko mampiasa ny motera Cura (CuraEngine).
Laminator izay ahafahanao manapaka tsara ny modely 3D, amin'ny sosona.
Amboary ny slicer anao ary amboary araka izay tianao.
Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny mpanonta printy 3D extrusion FDM. Indrindra amin'ny FlashForge.
Cross-platform (Linux, Windows, macOS, ary Raspberry Pi).
Vondrom-piarahamonina fampandrosoana lehibe hanatsara izany ary hahazo fanampiana raha ilaina.
Modular, miaraka amin'ny fahafahana manampy fiasa noho ny plugins.
Plugins ho an'ny Octoprint
Araka ny efa nolazaiko, OctoPrint dia rindrambaiko modular izay manohana plugins hanitarana ny fiasa fototra amin'ity rindrambaiko ity. ny plugins mahaliana indrindra izay anananao dia:
octolapse: dia plugin ho an'ny Octoprint izay ahafahanao maka sary mandritra ny dingan'ny fanontana ireo sombintsombiny. Noho izany dia azonao ampiasaina amin'ny horonan-tsary, fampianarana, firaketana ny fomba nanaovanao azy, sns. Ankoatra izany, na oviana na oviana dia tsy hita maso ny loha printy, ny ampahany ihany, miaraka amin'ny vokatra tena mahavariana.
Fanavaozana firmware: Ity plugin hafa ity, araka ny anarany, dia ahafahanao manavao mora foana ny firmware an'ny mpanonta 3D. Mba hanaovana izany, ny firmware dia tsy maintsy amboarina mialoha, ary manana fanohanana ny Atmega1280, Atmega 1284p, Atmega2560 ary Arduino DUE processeur.
Webcam ecran feno: Ity plugin hafa ho an'ny OctoPrint ity dia ampiasaina ahafahana mijery ny horonan-tsary fanontana amin'ny fotoana tena izy amin'ny efijery feno. Zavatra tsy vitan'ny rindrambaiko fototra. Izy io koa dia afaka mampiseho fampahalalana superimposed eo amin'ny efijery, toy ny fotoana fanontana, ny mari-pana, sns.
Webcam Streamer: Ity plugin hafa ity dia ahafahanao mampiseho ny fizotran'ny fanontana 3D amin'izay tianao, amin'ny alàlan'ny streaming. Tena ilaina amin'ny fandefasana mivantana amin'ny sehatra toa ny Twitch na YouTube Live.
Octoprint Anywhere: ity hafa ity dia ahafahanao mampiasa ny logiciel avy lavitra, avy amin'ny fitaovana finday rehetra mba hahafahanao mahita ny toetry ny mpanonta 3D. Ohatra, ho hitanao ny webcam amin'ny findainao, ny mari-pana, ny sata tena misy, ny bokotra fiatoana na fanafoanana, pikantsary, sns.
Fanafoanana ny zavatra: Indraindray dia mety namela ampahany maromaro tao amin'ny filaharana fanontana ianao, ary angamba ny iray tamin'izy ireo dia niala ka nanimba ny ambiny. Eny, miaraka amin'ity plugin OctoPrint ity dia azonao atao ny manasitrana mora foana ity toe-javatra ity. Esorinao fotsiny ny ampahany misy olana nefa tsy misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny ambiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hamonjy fotoana sy vola ianao.
Discord Remote: mamela anao hampifandray ny mpizara anay amin'ny fampiharana tranonkala Discord, handefa baiko amin'ny mpanonta 3D anao amin'ny alàlan'ny bot, ary amin'izany dia mitantana izany avy lavitra. Amin'izany fomba izany, ny bot dia hihaino ny baiko ary hanao ny asa voalaza (manomboka ny fanontana, manafoana ny fanontana, mitanisa ny rakitra STL, maka ny sarin'ny fakan-tsary, mampifandray sy manapaka ny mpanonta, sns.).
Themeify: mamela anao hanova maso ny lohamilina Octoprint, raha tsy tianao ny bika aman'endrinao ka te-hanova azy araka izay tianao. Ary tsy mila fahalalana momba ny CSS ianao.
Print Times Genius: ahafahantsika mahita tsara ny fotoana fanontana ny ampahany, satria ny an'ny Octoprint dia somary tsy marina kokoa. Mba hanaovana izany dia mampiasa algorithm kajy mandroso sy Gcodes tantara fanontana izy mba hanomezana fotoana fanontana tena izy.
Visualizer ambaratonga fandriana: Farany, ity plugin OctoPrint hafa ity dia ahafahanao mamorona, avy amin'ny fandrindrana, harato 3D amin'ny fandriana ho an'ny leveling. Zavatra tena ilaina raha manana sensor leveling ianao ao amin'ny mpanonta 3D, toy ny BLTouch.
Ahoana ny fametrahana plugin
Raha manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao mampiasa ireo plugins ao amin'ny OctoPrint, ny fametrahana azy ireo, rehefa alaina, dia mora. tsy maintsy ataonao fotsiny araho ny dingana manaraka hametraka azy amin'ny mpizara:
Midira amin'ny mpizara tranonkala OctoPrint.
Mandehana any amin'ny fizarana Octoprint Settings eo amin'ny faritra havanana ambony (kisary fanerena).
Jereo izao ny fizarana Plugin Manager.
Tsindrio ny bokotra Get More.
Octoprint izao dia manolotra anao fomba 3 samihafa hanampiana ny plugin:
Mametraka avy amin'ny tahiry ofisialy plugin
Mametraka avy amin'ny URL
Mametraka avy amina rakitra nampidirina
Ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana ny repo ofisialy, satria io no safidy azo antoka indrindra ary ilay manome anao ny dikan-teny farany amin'ny plugin.
Rehefa avy nisafidy izay ilainao ianao dia hapetraka ary ho vonona ianao mampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Octoprint: mitantana ny mpanonta 3D anao avy lavitra
Odroid Go: kitapo hanamboarana ny console lalao portable anao manokana